ISandals Foundation inika ukubuyisela uSmith's Reef Snorkel Trail
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeTurks kunye neCaicos » ISandals Foundation inika ukubuyisela uSmith's Reef Snorkel Trail
Caribbean • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Isiseko seSandals umnikelo wokubuyisela umzila we-snorkel
Ukubona okumangalisayo kwezinto eziphilayo eziphantsi kwamanzi eSmith's Reef Snorkel Trail zonke zilungiselelwe ukuba zihlolwe luluntu lwasekhaya, abafundi, kunye neendwendwe zamanye amazwe ngenxa yomsebenzi wokuvuselela oxhaswa ngemali yiSandals Foundation.
Umzila uvulwa kwakhona ngokulungiswa okwamkelweyo kwemfundo yaselwandle, ubomi. nendlela yokuphila.
Lo msebenzi ubalulekileyo uqinisekisa ukukhuselwa kobomi baselwandle obonwabisayo, ukhuseleko kwabo bahamba ngesikhephe, kunye nokuphila okuzinzileyo kwabo bafumana umvuzo ngokusebenzisa ijelo lokuhamba ngeenqanawa elikufutshane.
ISandals Foundation inikele nge-US $ 30,000 kulo mzamo.
Kukhunjulwa uSuku lweLwandle lweHlabathi olwenzeke kule nyanga, iTurks kunye neCaicos Reef Fund ngokusebenzisana neSebe lezokusiNgqongileyo kunye neZibonelelo zoNxweme zivula ngokuzingca ngaphezulu kweminyaka engama-20 ubudala kufutshane nomgaqo wonxweme emva kokumiliselwa kohlaziyo oluxatyiswe nje ngaphantsi kwe-US $ 30,000 ukusuka kwiSandals Foundation.
Imisebenzi yokubuyisela yayiquka ukucocwa kunye nokugcinwa okuqhubekekayo kweempawu ezikhoyo zendlela, ukufakwa kwemiqondiso yolwandle kunye neeboys ezimakishayo kwindawo ekuthiwa yi-snorkel site, ukwaziswa kwemigca yokuqubha ngaphandle kwendawo ye-snorkel ukuthintela abanqolobi ukuba bangene ngephutha kwisitishi sokuhamba, kunye nokunikezelwa kweempawu kunye nesinye isikhokelo sokugcina isikhokelo semilinganiselo yentsimbi.
Heidi Clarke, UMlawuli oLawulayo e iSandals Foundation wayechulumancile kukuvulwa kwakhona kwale ndawo ibalaseleyo, izisa namathuba emfundo nozinzo.
"Iimpawu ezintsha zeendlela ziya kongeza kumava atyebileyo emfundo yabafundi kunye nabahlali bendawo abazokwazi ukuphuhlisa uxabiso olunzulu kunye nokuqonda indlela nabo abanokunceda ngayo ukukhusela indalo entle," utshilo uClarke.
Ukuvulwa kwesiza kubaluleke nangakumbi, u-Clarke uqhubeke, njengomxholo woSuku lweeLwandle lweHlabathi kulo nyaka, “Uhlanganisa ukubaluleka koLwandlekazi noko sikwaziyo njengabemi baseCaribbean - ubomi bethu nendlela esiphila ngayo. Indawo yaselwandle yinxalenye yesazisi sethu njengommandla kwaye sonwabile ukuba le ndawo intle ye-snorkel ivulwe kwakhona ngezixhobo ezibuyiselweyo zokungakhuseli kuphela indalo ekhoyo kodwa nobomi nokuphila kwabantu ababelana ngezixhobo zayo. ”
U-Alizee Zimmermann, uMlawuli oLawulayo kwiTurks kunye neCaicos Reef Fund uvakalise umbulelo kwiSiseko sikaSandal ngemisebenzi yokubuyiselwa kwe Reef yase Smith exhaswa ngemali.
“ISmith's Reef luphawu lwaselunxwemeni oluselunxwemeni olonwabelwa ngabantu balapha kunye neendwendwe ngokufanayo. Iinzame zokubuyisela zenze indawo ekhuselekileyo yabasebenza ngesikhephe, ibalumkisa ukuba ijelo lesikhephe liqala phi ngokudibanisa umgca wokuqubha. Ukongeza, iringi ye-snorkel ngokwayo isebenza ukugcina abantu bevela kwiindawo ezingekho nzulu, ezibuthathaka elityeni, ukukhusela ii-corals zethu ezisemngciphekweni ngalo lonke ixesha zithatha i-snorkeler kukhenketho lolwazi ngokubekwa kwamanqaku angaphantsi kwamanzi. Iimpawu zaselwandle kunye neemephu ezingenawo amanzi kodwa ezinokuphinda zisetyenziswe ziya kwenza ukuba oku kube yinto eyonwabisayo, efundisayo kwaye engalibalekiyo kubo bonke. ”
IiTurks kunye neCaicos likhaya lesithintelo sesithathu ngobukhulu emhlabeni nangabahambi abangaphezu kwesigidi abahamba esiqithini minyaka le ukuya kuphonononga imimangaliso yendawo yaselwandle.
Ethetha kumsitho wokuvula kwakhona omfutshane owenziwe phantsi kwemigaqo engqongqo yokhuseleko, uMphathi Jikelele kwiiLwandle iTurks naseCaicos, uJames McAnally wancoma ukuba, “Njengokuba icandelo lezokhenketho kwesi siqithi liqhubela phambili, indawo esandula ukuvulwa kwakhona ye-snorkel iya kuba sisongezo esamkelekileyo kulonwabo lwaselwandle abafuna. ”
Iindwendwe kwiiLwandle iTurks kunye neeCaicos Resorts, uMcAnally wongeze, "bazakukhuthazwa ukuba baphonononge umkhondo we-snorkel ngokubamba izixhobo zabo zamanzi kwiziko leholide iAqua Centre nokuthatha uhambo olufutshane olwandle ukuya kwindawo evulekileyo eluntwini."
Iingqaqa zekorale zisengozini kuyo yonke iCaribbean nakwiTropiki yeAtlantic. Iindawo ezikufuphi nonxweme zizinto ezixabisekileyo njengoko zivumela iindwendwe ithuba lokufikelela ngokulula kunye nokufunda ngendlela emangalisayo indalo. Ukulungiswa kwakhona kweSmith's Reef Snorkel Trail kwaqala ngasekupheleni kuka-2019 kodwa kwaba nezithintelo ezininzi ngenxa yokuqala kwesibetho se-COVID-19.
Iprojekthi iyaqhubeka nobudlelwane obude phakathi kweTurks kunye neCaicos Reef Fund kunye neSandals Foundation abathe kwiminyaka edlulileyo baphumeza imisebenzi emininzi kulondolozo oluzinzileyo lweendawo zolwandle zesiqithi.